बिबाह, भएको पुरुषसँग किन आकर्षित हुन्छन युवतीहरु ? यी हुन् ६ कारण – News Nepali Dainik
बिबाह, भएको पुरुषसँग किन आकर्षित हुन्छन युवतीहरु ? यी हुन् ६ कारण
प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ १७, २०७७ समय: १५:४०:४७
***,हाम्रो समाजमा अधिकांस जोडीको उमेर ज्यादै फरक हुन्छ । केही अपवाद छोडेर सबैजसो जोडीमा पुरुषको तुलनामा महिलाहरु कम उमेरका नैहुने गर्दछन्। खासमा पुरुषले आफू भन्दा कम उमेरकी महिला त खोज्छन नै महिलाहरु पनि आफू भन्दा पाको उमेरको पुरुषसँग सम्बन्ध राख्न चाहन्छन् । हालसालै गरिएको एक अध्ययनले पति यस्तो देखाएको छ
(किन पाको पुरूष रोज्छन् त महिलाहरु यस्ता छन् कारण)
Last Updated on: January 30th, 2021 at 3:40 pm